45 Siyaabood oo loogu heli karo buugaag bilaash ah carruurta boostada 2022 - Wareegga Wealth
Bogga ugu weyn 45 Siyaabood oo carruurta loogu helo buugaag Bilaash ah 2022
Sawir laga soo qaaday https://www.shutterstock.com/
The post Xaqiiqooyinka Covid waxay ku sii jiri karaan inay nala noolaadaan weligood. Nolosha, gaar ahaan carruurta, waa in lagu noolaado deegaan 'ilaaliyo' ah. Ka ilaalinta carruurta soo-gaadhista ka dhigaysa inay u nuglaadaan khataraha Covid19.
Wax kasta oo xaqiiqda jira, Carruurtu WAA INAAN la joojin waxbarashada. Dhammaanteen waxaan isku raacsanahay in aqoonta ugu fiican laga helo bogagga dahabka ah ee buugaagta. Welwelka waa inuu noqdaa, “sideen ugu helnaa buugaag bilaash ah carruurta boostada?” Iyagoo wali ka ilaalinaya inay soo gaaraan wax aan loo baahnayn.
Muhiimada ayaa ah “boostada, ”Si aad sidoo kale u yarayso fursadahaaga inaad la xiriirto dhowr qof. Sababtoo ah, haddii ay tahay inaan ilaalino caafimaadka Carruurta, waa inaan ka taxadarnaa inaannaan noqon barta koowaad ee halista caafimaadka.
Waxaan ku tusi doonaa sida loogu helo buugaag lacag la'aan ah carruurta boosto ahaan aqrintaan. Waxaan kaa codsanayaa inaad ila joogto.
Kahor intaanan ku tusin farsamooyinkan, aan marka hore ka jawaabno xoogaa walaacyo gaar ah oo ku saabsan helitaanka buugaag bilaash ah oo loogu talagalay carruurta.
Ma jirtaa hab lagu helo buugaagta Kid lacag la'aan?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu helo buugaag lacag la'aan ah. Siyaabahaas qaarkood waxaa ka mid ah;
Beddelidda buugga: waxaad ku beddeli kartaa buugaagtaada saaxiibbada, qoyska, asxaabta, iwm kuwa ay haystaan ​​ee aad u baahan tahay laakiin aadan iibsan karin. Habkaas, waxay kuu akhrinayaan adiguna adigu waad aqrisay kooda, adigoon qarash gareyn.
Maktabadda: Maktabaddu waa hal dariiq oo la maareyn karo si loo helo buugaag lacag la'aan ah. Maktabadaha badankood waxay kaa rabaan diiwaangelintaada xubinnimada, si ay kuu siiso fursad aad ku amaahato oo aad ku akhrido buug kasta lacag la'aan.
Ebooks lacag la'aan ahHaddii ebooks ay yihiin kuwa aad ugu jeceshahay, markaa waxaad haysataa dhawr ikhtiyaar oo aad ku geli karto ebooks bilaash ah. Waxaa jira goobo badan oo internetka ah oo loogu talagalay ebooks bilaash ah. Kuwa ugu caansan waa; Mashruuca Gutenberg iyo Free-ebooks.net.
Sideen ku heli karaa buugaagtan bilaashka ah ee carruurta boostada?
Halkan waxaa ah dhowr siyaabood oo boosta looga helo buugaagta carruurta ee bilaashka ah;
Maktabadda Khayaaliga ah ee Dolly Parton; Waxa ay tan u dejisay kaliya in buugaag bilaash ah loogu diro carruurta boostada.
Barnes & Noble Barnaamijyada Akhriska Xagaaga.
Sanduuqa Waxqabadka Mareykanka ee Carruurta iyo Dadka Qaangaarka ah.
Wareegga xorta ah
Buugaagta Bilaashka ah ee Amazon; waxay leedahay buugaag bilaash ah oo dhowr carruur ah, oo loo heli karo soo dejinta Kindle.
Maktabada Amaahda Milkiilayaasha Prime Kindle ee Amazon.
Sheekooyinka Carruurta Bilaashka ah.
Maktabadda Dijital ah ee Carruurta Caalamiga ah.
Hadda waxaan ku tusi doonaa sida loogu helo buugaag bilaash ah oo loogu talagalay carruurta emaylka si faahfaahsan.
45 siyaabood oo layaab leh oo boosta loogu heli karo buugaag bilaash ah ayaa hoos ku taxan.
1. Maktabadda Khayaaliga ah ee Dolly Parton
Tani Maktabadda Mala -awaalka waxaa loo asaasay oo keliya in carruurta loogu diro buugaag lacag la'aan ah boostada.
Ilmo kasta oo jira 0-5 sano ayaa la qori karaa si uu uga faa'iidaysto barnaamijka. Maktabadda dalwaddu waxay u dirtaa ka -faa'iideystayaasha 1 buug/bishii lacag la'aan.
Si kastaba ha ahaatee, si naxariis leh u fiirso in jaaliyadahan gudaha Maraykanka oo kaliya ay ka qayb qaadan karaan tan; UK, Canada, Australia iyo Jamhuuriyadda Ireland.
Haddii aad degan tahay beelahan, oo ilmahaagu u qalmo, ka faa'iidayso fursadda.
2. Wakaalada Ilaalinta Deegaanka
Hay'adani waxay waddaa barnaamij buugaag bilaash ah ugu dira carruurta meel kasta oo Maraykanka ah boostada.
In kasta oo tan lagu beegsanayo kor u qaadista wacyigelinta bay'ada ee carruurta ku nool Mareykanka, haddana waa hab waxbarasho oo aad u weyn oo aan laga bixin karin.
3. Buugaagta Bilaashka ah ee Amazon
Amazon waxay leedahay buugaag bilaash ah oo dhowr carruur ah, oo loo heli karo soo dejinta Kindle.
4 La maqli karo
In kasta oo aysan tani kuu heli doonin buugaag adag oo dhab ah oo lacag la’aan ah, haddana waxaa mudan in la xuso in hab kale oo buug bilaash ah looga helo Amazon ay la socoto Audible
Waxaad heli kartaa tijaabo 30 maalmood ah oo lacag la'aan ah halkan iska soo qor leh Audible. Inta lagu jiro wakhtigaas, waxaad heli doontaa hal buug oo maqal ah oo aad dooratay.
Iyo xitaa haddii aadan ku dheganayn tijaabada lacag la'aanta ah, waxaad sii wadi doontaa helitaanka buuggaas maqalka ah!
5. Barnes & Noble Barnaamijyada Akhriska Xagaaga
Barnes & Noble waxay leeyihiin wax weyn barnaamijka akhriska xagaaga sannad kasta oo ay carruurta ugu soo diri doonaan buugaag lacag la'aan ah ilmo kasta oo ka socda fasallada 1 illaa 6 ee akhriya siddeed buug.
Waxaa jira ku dhawaad ​​10 buugaag oo laga dooran karo heer kasta oo da 'kasta iyo waxa kaliya ee ilmahaagu sameeyo waa inuu buuxiyo foom laga heli karo iskuxirka kore halkaas oo ay ku leeyihiin cinwaanka, qoraaga iyo qaybta uu jecel yahay buug kasta oo ay akhriyeen.
Si fudud ugu dhiib foomkan oo dhammaystiran dukaan kasta oo Barnes & Noble ah buugga bilaashka ahna waa koodii!
6. Aqri Conmigo
Akhri Conmigo wuxuu siiyaa buugaagta carruurta ee bilaashka ah boosto ku qoran Isbaanish iyo Ingiriis oo loogu talagalay carruurta da'doodu tahay preschool ilaa fasalka shanaad.
Tan iyo markii la aasaasay 2010, barnaamijkani wuxuu ugu deeqay in ka badan hal milyan oo buug buugaag, qoysas iyo maktabado.
Tani waxay ka dhigan tahay inay sidoo kale tahay hab weyn oo macallimiintu ku heli karaan buugaag bilaash ah labada luqadoodba!
Hadda waxaa kaliya laga heli karaa California, Florida iyo Texas laakiin haddii aad iska diiwaangeliso liistadooda boostada, waxay kuu sheegi doonaan haddii barnaamijku ku fido gobollada kale ee Mareykanka.
7. Sanduuqa Waxqabadka Maraykanka ee Carruurta iyo Dadka Waawayn ee Indhoolayaasha ah
Haddii ilmahaagu indhoole yahay ama araggiisu hooseeyo oo uu akhriyo farta indhoolaha barnaamijkan oo ay bixiso Sanduuqa Waxqabadka Mareykanka ee Carruurta Indhoolayaasha ah iyo Dadka Waaweyn ayaa kuu noqon doona mid la yaab leh.
Carruurta u saxiixda tan ayaa heli doona 12 buug oo lacag la'aan ah boosto ahaan, kuwaas oo dhamaantood ah magacyo aan hore loogu soo bandhigin farta indhoolayaasha.
Fiiri boggooda si aad wax badan uga ogaato.
8. Kooxda Daabacaadda Baker
Kooxda Daabacaadda Baker waa goob kale oo aad ka codsan karto dib u eegista buugaagta adiga oo ku beddelanaya nuqullo bilaash ah.
Waxay ugu horreyn haystaan ​​buugaag Masiixiyiin ah waxayna sheegeen inay raadinayaan dad leh "meel adag oo caawin karta qorayaasha". Markaa haddii aad leedahay kanaal YouTube ah oo si cadaalad ah loo daawado ama baloog si fiican loo aasaasay, waxa laga yaabaa inaad nasiib badan halkan ku haysato.
Si fudud u dalbo halkan markaa sug inaad maqasho.
9. Buugga Fiiri Bloggers
Ceebiyaha Bogga (oo hore loogu yeeri jiray Book Look Bloggers) waxaa loogu talagalay dadka wax ku qora ee doonaya inay ku dhejiyaan faallooyinkooda.
Haddii ay tani u eg tahay adiga - oo aad xusi doonto waa inaad lahaataa xaddiga ugu yar ee taraafikada si aad ugu qalanto - fiiri boggan si aad u aragto buugaagta bilaashka ah ee aad halkan ka qaadan karto.
10. Kutubta diinta
Waxaa jira dhowr goobood oo boosta ku bixiya buugaag ruuxi ah oo lacag la'aan ah.
Haddii aad hore u raacday caqiidadaas gaarka ah ama aad xiisaynayso inaad wax badan barato, mid ka mid ah goobahan ayaa laga yaabaa inuu haysto waxaad raadineyso.
11. Naadiga Abaalmarinta Akhriskayga
Naadiga Abaalmarinta Akhriskayga waxaa loo yaqaannay Shabakadda Tyndale Blog, oo ku saleysan xaqiiqda ah inay maamusho Tyndale Publishers, daabacaha buugaagta Masiixiyiinta ah.
Bogan, waxaad ku kasban kartaa dhibco dhanka buugaagta bilaashka ah. Dhibcaha waxaa lagu kasbadaa waxyaalo ay ka mid yihiin iibsashada buugaagta (laga daabaco daabacayaasha Tyndale), tixraacidda saaxiibbada, qaadista xog -ururinta iyo is -qoritaanka wargeysyada.
In kasta oo dhammaan buugaagta la heli karo ay yihiin kuwo diintu ku jihaysan tahay, haddana waxaa jira xulashooyin da 'walba leh markaa fiiri si aad u aragto haddii ay jiraan wax lagu dari karo maktabaddaada.
12. Baybalka Ameerika
Kitaabka Quduuska ah ee Ameerika wuxuu bixiyay 1.6 milyan oo Kitaab oo lacag la’aan ah laga soo bilaabo sanadkii 2000
Iyaga oo si fudud u buuxinaya macluumaadkaaga, waxay bixiyaan Kitaabka Quduuska ah iyo sidoo kale buugaag kale oo lacag la'aan ah oo ay ku jiraan waxbarista Masiixiga.
13. BDK Ameerika
BDK Ameerika waxay siisaa nuqullo adag oo bilaash ah oo ah Barashada Buudda qof kasta oo ku nool qaaradda Mareykanka (iyo haddii aad ku nooshahay Hawaii, waad la xiriiri kartaa halkan).
Haddii aad raadineyso inaad waxbadan ka ogaato Buddhism, tani waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo sidaas lagu sameeyo.
Wanaagsan waa goob baaxad leh oo loogu talagalay qof kasta oo jecel akhriska. Kumanaan qof ayaa tan u isticmaalay si ay u bixiyaan talooyinka buugga, markaa waa goob weyn oo laga helo buugga xiga ee liiska akhriskaaga.
Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo ay leedahay qayb wax -bixin ah oo qorayaasha (iyo, mararka qaarkood, daabacayaasha) ay bixiyaan buugaag bilaash ah.
In kasta oo tartanku noqon karo mid daran, tani waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo lagu helo waxyaabaha sida sheekooyinka bilaashka ah boostada haddii aad nasiib u leedahay inaad ku guuleysato.
15. Wareegga xorta ah
Wareegga xorta ah wuxuu ka kooban yahay kooxo adduunka oo dhan ku lug leh oo dadka ku bixiya waxyaalo lacag la'aan ah aaggooda - iyo dadka ka faa'iideysanaya waxyaabahan xorta ah.
Waxay si joogto ah u haystaan ​​buugaag lacag la'aan ah, in kastoo mararka qaarkood ay tahay inaad soo qaadato halkii aad ku heli lahayd boostada.
Laakiin si loo helo sheekooyin lacag la’aan ah boosta oo laga yaabo inay tahay dhowr sano ka hor, FreeCycle had iyo jeer waxay lahaan doontaa wax la heli karo.
Malaha waad ogtahay craigslist si aad u hesho (mararka qaarkood) alaabta guriga laga helo ama (inta badan) dadka guriga deggan ee la isweydiiyo, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa il weyn oo buugaag lacag la'aan ah.
Inta, sida caadiga ah, waad awoodaa raadi buugaag raqiis ah on Craigslist, dadku waxay sidoo kale ku bixin doonaan buugaag bilaash ah boggan markay isku dayayaan inay banneeyaan meel bannaan.
Khasaarahooduna waa faa'iidadaada!
17. Daabacadaha Focus Christian
Daabacadaha Focus Christan waxay leedahay liis ah 13 hagayaal jeebka oo bilaash ah kuwaas oo, sida ay tilmaamayaan, bixiya “hordhac fikradaha muhiimka ah iyo dadka, kuwaas oo muhiim u ah iimaanka Masiixiga”.
18. Kac Siminaarrada Ameerika
Toos u Siminaarrada Ameerika sidoo kale waxay bixisaa buugaag bilaash ah oo ku salaysan mabaadi'da Masiixiga.
Xaaladaha qaarkood, buugaagta laftoodu waa bilaash laakiin waxaa lagu weydiin doonaa inaad iska bixiso boostada - laakiin had iyo jeer maahan.
Haddii aad raadinayso nuqul bilaash ah ee Kitaabka Mormon, tan ayaa laguu soo diri karaa Mormon.org.
20. Kaniisadda Ciise Masiix ee Awliyada-dambe
Waxa kale oo aad heli kartaa nuqul bilaash ah oo ka mid ah King James Version ee Kitaabka Quduuska ah adigoo foomkan ku buuxinaya mareegaha internetka Kaniisadda Ciise Masiix ee Awliyada-dambe.
21. Weydiiyaha Dabiiciga ah
Haddii aad waligaa u maleysay inaad jeceshahay "shinni" saynisyahan, markaa buugga midabaynta bilaashka ah ee ay bixiso Weydiiyaha Dabiiciga ah kuu noqon kara
Waxay kuugu soo diri doonaan buug bilaash ah boostada marka aad soo gudbiso faahfaahintaada, iyadoo kan hadda ee wakhtiga qorista uu yahay buug midabaynta "Bee Saynisyahan".
Yaa iska celin kara ?!
22. Taasi DailyDeal
Buugaagta midabaynta ee loogu talagalay dadka waaweyn waxay noqdeen kuwo aad caan u ah sannadihii u dambeeyay si ay u niyad jabiyaan oo ay u dejiyaan.
Well, TaasiDailyDeal waxay bixisaa buug midabaynta bilaashka ah ujeedadan saxda ah. Waxay qaadan kartaa ilaa siddeed toddobaad dhalmada, laakiin kani waa buug bilaash ah oo caafimaad u yeelan doona boorsadaada iyo maskaxdaada labadaba.
QiimahaMags waxay leedahay joornaallo bilaash ah oo la soo bandhigay - mana aha inaad xitaa gasho kaarka deynta si aad u hesho.
Si fudud u qor magacaaga iyo cinwaankaaga oo joornaalkaaga cusub ee bilaashka ah ayaa kuu iman doona.
free The Lego Majaladda Life waa tan kuugu dhow si aad boostada ugu hesho buugaag majaajillo ah oo bilaash ah.
Joornaalkan waxaa loogu talagalay carruurta shan ilaa sagaal jirka ah waxaana ka buuxa majaajilo, waxqabadyo, boodhadh iyo wax ka badan.
Qaybta ugu fiicani waxay tahay inay kuugu soo gudbin doonaan bilaash afar jeer sannadkii.
Hagaha2Free Waxay leedahay buugag bilaash ah oo kala duwan oo la soo bandhigay, laakiin waxa ugu muhiimsan ee ay bixiso waa joornaalada bilaashka ah.
Waqtiga qorista maqaalkan, waxay heshay rukhsad Marie Claire oo bilaash ah, rukun Saynis Caan ah oo lacag la'aan ah iyo rukun bilaash ah oo loogu talagalay Majaladda Dadka, iyo kuwo kale.
Xaaladaha qaarkood, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso kaarka deynta, markaa hubso inaad akhrido daabacaadda ganaaxa si aad u ogaato marka muddada xorta ahi dhammaato.
Haddii kale, tani waa hab fiican oo laguugu soo diri karo joornaalada bilaashka ah.
26. Buugaag bilaash ah ayaa laguugu soo diraa gurigaaga si loogu beddelo buugaagtaada
Mararka qaarkood waxaa jira xoogaa wax-siinta iyo qaadashada nolosha. Xaaladdan oo kale, waxaad ku heli kartaa buugaag lacag la'aan ah boostada, laakiin kaliya haddii aad bixiso buug ka duwan soo celinta.
Xaaladdan oo kale, waxaad heleysaa faa'ido laba -laab ah: waad yareyn doontaa gurigaaga oo waxaad u heli doontaa wax cusub beddelka liiskaaga akhriska!
Buug Gudbinta wuxuu isu keenaa bulsho ku dhow 2 milyan oo buug-jecel oo ka kala yimid daafaha dunida oo jecel inay la wadaagaan buugaagtooda kuwa kale.
Si fudud buuggaaga ugu dheji “Khariidadda Buugga” ka dibna fiiri waxa agtaada laga heli karo. Buugaag ku leh Yurub, Waqooyiga Ameerika, Australia iyo in ka badan, waxaa lagaa rabaa inaad hesho wax kuu dhow.
BookMooch wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah. Mar kasta oo aad qof siiso buug, waxaad kasbataa dhibic. Tani waxay markaa kuu oggolaaneysaa inaad ka hesho buug kasta oo aad ka rabto qof kale madalkooda.
Oo haddaad buug u dirto qof dibadda jooga, waxaad heli doontaa saddex dhibcood!
Waa inaad lacag ka bixisaa boostada marka aad buug u dirayso dadka kale. Taas macnaheedu waa, in kastoo, helitaanka buugga gebi ahaanba bilaash yahay.
29. Warqadda Beddelka
Is -dhaafsiga Waraaqaha waa fikrad la mid ah kuwa kale, taas oo ah inaad ka dhigto buugag ay heli karaan isticmaaleyaasha kale.
Marka qof qaato, waxaad markaa heli doontaa mid ka mid ah buugaagta bilaashka ah ee ay hayaan. Wakhtiga qorista, maktabaddooda waxaa yaalla in ka badan 1.2 milyan oo buug!
Waxaad sidoo kale bixin doontaa boostada buugaagta aad soo dirto taas oo macnaheedu yahay, mar labaad, inay bilaash tahay markaad hesho buuggaaga.
30. Hunt4 Freebies
Hunt4 Freebies ku taxan buugaag farabadan (iyo majalado) lacag la'aan ah oo aad ka heli karto intarneedka oo dhan.
Qaar ka mid ah buugaagta ayaa kaliya lagu heli karaa foomka Kindle laakiin sidoo kale waxaa jira buugaag adag oo lacag la'aan ah oo la heli karo, sidaa darteed waxaa habboon in mar mar la fiiriyo si loo arko waxa jira.
31. Muunado Lacag La'aan Ah
Muunado Lacag La'aan Ah waa, ka sokow inaysan ahayn khiyaamo, goob ku habboon in la helo muunado bilaash ah.
Waxay leedahay buugaag adag oo adag oo bilaash ah, buugaagta majaajilada ah, buugaagta elektaroonigga ah iyo buugaag maqal ah, markaa eeg si aad u aragto haddii mid ka mid ah xayndaabkiisa aad xiisaynayso.
32. Waxyaalo Macaan oo Macaan
Cunto Macaan Oo Bilaash Ah waxay leedahay buugaag kale oo si caddaalad ah isku qasan oo la heli karo, iyo sidoo kale buugaag iyo majallado.
Dhammaan bogagga leh liisaska aan kala sooca lahayn ee buugaagta bilaashka ah ee liiskan ku jira, sheekooyinka bilaashka ah ee kan ayaa runtii iila muuqday kuwa ugu xiisaha badan.
33. Bogga Xorta ah
Bogga Bilaashka ah waxay leedahay liis adag oo lacag la'aan ah, kuwaas oo badankoodu diinta ku wajahan yihiin laakiin dhammaantood ma aha.
Waxay u badan yihiin akhristayaasha Mareykanka oo keliya, laakiin sidoo kale waxaa jira qaar ay heli karaan deganeyaasha Kanada taas oo ka soocda qaar ka mid ah goobaha kale ee liiskan ku jira.
34. Yo Sample Free
Yo Muunado Bilaash ah ma aha mid diirada saaraya buugaagta bilaashka ah sida boggaga kale ee liiskan ku jira, laakiin waxay leedahay waqti ka waqti.
Its liiska buugaagta bilaashka ah waa wax cajiib ah in kastoo, oo leh in kabadan 100 ikhtiyaar oo si joogto ah loo cusbooneysiinayo.
35. Adeegga Akhriska Harlequin
Adeegga Akhriste waxay bixisaa laba buug oo lacag la'aan ah oo laguugu soo diro gurigaaga, wax su'aalo ah lama weydiin.
Qabashada ayaa ah haddii aadan baajin, waxay sii wadi doonaan inay soo diraan laba buug bil kasta laakiin, bisha koowaad ka dib, waxaa lagugu soo oogi doonaa “qiimo dhimis xubinta kaliya”.
Laakiin ilaa intaad sidaas samaynayso, tani waa hab sahlan oo lagu helo buugaag lacag la'aan ah boostada boostada.
Halka dumarka loo suuq geeyeyna, ma jirto sabab ay raggu taasna uga faa’iidaysan karaan!
36. Maktabadda xaafaddaada
Maktabado badan ayaa bixiya barnaamijka "buugga boostada" kaas oo ay buugaag ugu soo dirto gurigaaga. Xaaladaha qaarkood, codso buugaag gaar ah, laakiin, kuwa kale, waxaad bixin doontaa xiisaha akhriska iyo maktabaddu waxay soo diri doontaa buugaag ay u malaynayso inaad jeceshahay.
(Boostada waa lacag la'aan labada dhinacba!)
Tusaale ahaan, Maktabadda Dadweynaha New York waxay tan siisaa dadka guriga ku maqan.
Fiiri maktabadaha aaggaaga ku yaal si aad u ogaato haddii middaani diyaar kuu tahay.
Taasna ha iloobin haddii waxaad isku deyeysaa inaad lacag keydsato, maktabadaha waxay leeyihiin waxyaabo kale oo lacag la'aan ah oo la soo bandhigo oo aan shaqo ku lahayn buugaagta. Tani liiska 200 oo shay waa meel fiican oo laga bilaabo.
37. Kulliyadda Hillsdale
Haddii aad ugaarsato nuqul bilaash ah oo ka mid ah Dastuurka Mareykanka iyo Baaqa Madaxbannaanida, waxaa laguugu soo diri karaa bilaash Kuliyada Hillsdale.
Waa jeebka “kaliya”-laakiin laga yaabee taasi waa wax fiican haddii aad u malaynayso inaad u baahan tahay inaad karbaashto mustaqbalka!
38. Mashruuca Gutenberg
Mashruuca Gutenberg waa ururinta in ka badan 60,000 oo buugaag ah, dhammaantoodna waa lacag la'aan, inta badan sababtoo ah xuquuqdoodii ayaa dhacday.
Aynu hore u soconno: kuwani waa ebooks bilaash ah, markaa ma heli doontid buugaag bilaash ah boostada boostada halkan.
Laakiin aruurintu waa mid la yaab leh oo runtii mudan in la xuso akhriste kasta oo aad u xiiseeya oo raadinaya buugaag bilaash ah - xitaa haddii ay yihiin “ebooks” keliya.
39. JIFFY Buugga Recipe
Haddii aad raadinayso cuntooyin bilaash ah oo aad ku nooshahay qaaradda Ameerika, the Jiffy Recipe Book waxay noqon kartaa waxaad u baahan tahay.
Gabi ahaanba waa bilaash oo xitaa waad ka hubin kartaa khadka intarneedkaas marka hore si aad u xaqiijiso inay tahay wax aad rabto.
40. Buugga Cuntada ee Qorraxda-Gabadha
Malaha waad ogtahay Sun-Maid sida go-to for sabiib, laakiin waxay sidoo kale bixiyaan saddex buug-yaraha cuntada.
Waxaad u soo dejisan kartaa si PDF ah ama waxaad dalban kartaa nuqul adag haddii aad doorbidayso, ka hor intaadan ogaanin, buugga cunto karinta ee bilaashka ah wuxuu ku jiri doonaa sanduuqaaga boostada.
41. Buugaag lacag la'aan ah boostada lagu beddelayo dib u eegid
Xaaladaha qaarkood, waxaa jira goobo kuu oggolaanaya in laguu soo diro buugaag bilaash ah gurigaaga - laakiin waa haddii aad dib u eegto.
Hubaal, waxay ka dhigan tahay inaad xoogaa shaqo qabato si aad u hesho buuggaaga bilaashka ah. Laakiin marka lagu siiyo inaad akhrin lahayd si kastaba, waxay ku yar tahay inay shaqo tahay!
NetGalley waa mid ka mid ah boggaga waaweyn ee bixiya buugaagta bilaashka ah si loogu beddelo dib u eegista.
Iyadoo la xusayo inay la shuraakowdo qaar ka mid ah daabacayaasha ugu weyn adduunka, buugaagta la soo bandhigay runtii waa kuwo cajiib ah.
(Oo kaliya kuma koobna Mareykanka, maadaama ay sidoo kale leedahay noocyo boggeeda loogu talagalay booqdayaasha Faransiiska, Jarmalka, Japan iyo Boqortooyada Midowday.)
43. Lola's Blog Tours
Lola's Blog Tours wuu ka yar yahay NetGalley, taasoo la macno ah inaysan haysan buugaag badan oo bilaash ah oo la soo bandhigay.
Taasi waxay tidhi, waxaa jira ikhtiyaarro la heli karo waqti ka waqti lacagtaada kaliya ayaa ah inaad ka tagto dib -u -eegid. Markaa marmar dib u fiiri si aad u aragto haddii ay jiraan wax adiga kugu habboon.
44. Dhiirrigelinta Buugga la sixray
Dhiirrigelinta Buugga Sixirka waxaa laga yaabaa inaysan haysan buugag badan oo bilaash ah, laakiin waxay heshay noocyo kala duwan oo cajiib ah oo ku yaal boggeeda.
Si fudud u dooro buuggaaga oo ku dheji dib -u -eegistaada hal bil gudaheed si aad u buuxiso shuruudahooda xitaa buugag badan oo lacag la'aan ah.
45. Sheeko Cusub
Sheeko Cusub waxay la mid tahay kuwa kale ee kor ku taxan oo aad ka dooran karto mid ka mid ah boqollaalkooda wax -bixinta waxaadna ku heli doontaa buug bilaash ah boostada.
Waa inaad buuxisaa foomkan si aad u codsato noqoshada Laakiin marka aad u qalanto, baaxadda ku jirta Fiction Fresh ayaa hubin doonta inaad mar walba haysato buugag kala duwan oo lacag la'aan ah.
On Maktabada, waxaad arki kartaa liis buugaag ah, imisa nuqul oo bilaash ah ayaa la heli karaa si loo eego iyo inta xubnood ee iyaga codsaday.
Waa dhif in la arko wax ka yar 100 qof oo dalbanaya buug inkasta oo inta badan la heli karo oo keliya inta u dhaxaysa 15 iyo 50 nuqul oo bilaash ah. Laakiin nasiib wanaag iyo adkaysi, ma jirto sabab aadan ku heli karin buug bilaash ah oo aad ku eegto boggan.
Waa inaad ku booddaa adiga oo aad u faraxsan hadda. Gaar ahaan, adigoo og inaad ku heli karto dhammaan buugaagta bilaashka ah ee carruurtaada boostada.
Waxaan kugula talinayaa inaad la xiriirto inta badan boggaga aan kor ku soo sheegnay si aad u codsato buug ama buug.
Aad bay u fiican tahay inaad isku daydo dhammaan xulashooyinkaaga markan. Marna ma sheegi kartid akhrinta weyn ee sugaysa carruurtaada.
Waqtigan xaadirka ah, fadlan noo sheeg waxa aad ka aaminsan tahay boggayaga iyo qoraalkan qaybta faallada ee hoose.
13 Talooyin Degdeg ah oo Lays Wajinayo Fat
Sida Loo Hubiyo Dheelitirka Kaarka Hadiyadda ee Chipotle
25 Siyaabood oo lacag laguugu siiyo Qoraallada Faallooyinka | Lacag Degdeg ah
Mushahar Ka Qaad Si Aad U Wato Baabuurkaaga | Illaa $ 50 Saacaddii
Lacag La Siin Si Aad U Ciyaarto Ciyaaraha: Meelaha Ciyaaraha Ugu Fiican
Faallooyinka HealthyWage 2022: HealthyWage ma sharcibaa? Sida ay u shaqayso |
Sida Loo Bixiyo Dayactirka Baabuurka Lacag La'aan 2022: 5 Siyaabood Oo Macquul Ah.
Maxaa dhacaya marka gaarigaagu jabo oo aadan haysan lacag caddaan ah oo aad ku bixiso…
20 Hadiyadaha ugu Fiican Qorayaasha 2022
Inta badan qorayaasha waa dad keligood ah. Inta badan waa iskood, qorista iyo fulinta mashaariicda gacanta
15 Goobo Oo Farshaxanka Lagu Iibin Karo Lacag Badan | 2021
Iibinta farsamada gacanta waa ganacsi faaido badan waxaana jira mareegaha iyo goobo badan oo aad soo bandhigi karto…
Sicir -dhimista Ardayga ee Krispy Kreme Kahor Kuwa Kale 2021 -ka
In yar oo laga guurayo buuqa ka jira goobta cusub ee Krispy Kreme ee NC oo leh 24-saac…
25 Boutiques Online ah oo Jaban oo leh Dhar Wanaagsan | Cusboonaysiinta 2022
Dhammaanteen waan jecel nahay dharka naqshadeynta waxaan jeclaan lahayn inaan helno armaajooyin ay ku jiraan qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha ugu wanaagsan sida…